Newa Times : बसन्त महर्जन
भनिन्छ, फस्ट इन्प्रेशन इन लास्ट इम्प्रेशन, संभवतः यही ‘इम्प्रेशन’ले काम गर्यो । एकपल्ट एउटा उपन्याससम्बन्धी कार्यक्रममा उनी मेरो नजिक आएर भोलि वा केही दिनपछि उनैको एउटा उपन्यास विमोचन कार्यक्रममा डाके । गइनँ, यसले पनि असर गर्यो होला ।
विभिन्न जातका फूलहरू
कुनै जमानाको गफाडी पछि बक नै नफुट्ने बनेको कुरा तपाईले सुन्नु भएको छ ? यदि यस्तो भएको छ भनियो भने तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? तपाईं भन्नुहुनेछ, हुनै सक्दैन । हामीले कतिपय बहिरोलाई उपचारपछि सामान्य तुल्याइएको सुनेका छौं तर रह“दा खा“दाको सग्लो मानिस कुनै दुर्घटना विना बक नफुट्ने भएको कुरा अलि विश्वास गर्न गाह्रो तर यथार्थ हो ।
महात्मा गान्धी एउटा सादगीपूर्ण जीवनको विम्वका रुपमा स्थापित छ तर वास्तवमा विम्वअनुसार उनको जीवन त्यति सादगीपूर्ण नभएको अर्को पाटो हो । भारतले राष्ट्रपिताको उपाधि दिएका मोहनदास करमचन्द गान्धी आफ्नो असामान्य यौनजीवनका लागि बदनाम छन् । तथापि, छवि नबिग्रियोस् भनेर गान्धीका नकारात्मक पाटोलाई पर्दा लगाउने कोसिस भएको छ र प्रमाणहरू दबाइएको छ ।
मुस्ताङ जिल्लाका महिलाहरु जति कर्मठ हुन्छन् त्यति नै धार्मिक प्रवृत्तिका पनि हुन्छन् ।
चिसो र वर्षाबाट बच्न एउटै बोरामा ओत लागिरहेका बाबु छोरा ।
कुनै अर्को राज्यमा आफ्नो राज्यका चेलिबेटीहरुलाई उपहारका रुपमा पठाइने कुरा त अन्यत्र मुलुकहरुमा पनि पाइन्छ तर बेच्न कै लागि भनी राज्य शक्ति नै लागेको भने नेपालमा बाहेक अन्यत्र पाइँदैन ।
प्रेमबहादुर कंसाकारको विशेष प्रयासले र त्यसमा अरुहरूको पनि सहयोगले हजारौं प्राचीन अमुल्य ग्रन्थ र अभिलेख संग्रह गर्ने कार्य अनि त्यसकै संरक्षणको निमित्त यो आशा सफूकुथि स्थापना गर्ने कार्य यो क्रममा जनस्तरले भएको एक अत्यन्तै सह्राहनीय काम हो । यो काममा हामी सबैले सक्दो सहयोग गरेर यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सके यो एउटा उदाहरणीय देश सेवाको काम हुन जान्छ ।
‘नेपाल’ शब्दले तीन वटा भौगालिक क्षेत्रलाई बुझाउ“छ । ती हुन् नेपाल गर्त – (स्वनिगः, नेपाल खाल्डो, नेपाल उपत्यका वा बृहत्तर काठमाडौं), नेपाल मण्डल (मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका पहाडी प्रदेश) र नेपाल अधिराज्य (पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग)
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणासँगै 'नयाँ नेपाल' निर्माणको प्रसंग उठेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि वषौर्अघिदेखि संघर्ष गरिरहेका जनताको चाहना स्वयंमा नयाँ नेपालको स्थापना हो । सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ नेपालको स्थापना भए पनि व्यावहारिक रूपमा यसले मूर्तरूप लिन सकिरहेको छैन । अतः त्यस्ता थुप्रै मुद्दामाथि छलफल गर्नुपर्छ, जसले नयाँ नेपाललाई मूर्तरूप दिनेछन् । संविधान निर्माणको अभ्यास एउटा त्यही प्रयास हो भने अरू पनि थुप्रै मुद्दा छन् जसमाथि छलफल गर्नुपर्छ । त्यस्ता मुद्दामध्ये एक हो, राजधानीको स्थानान्तरण । अब राजधानीलाई नै अन्त सार्ने अर्थात् नयाँ राजधानीको स्थापना किन नगर्ने त ?
नेपालको राजनीतिक पटचित्रहरु द्रूततर गतिमा फेरिंदो छ । पछिल्लो विकास ठूलो विवाद र अन्यौलपूर्ण स्थितिबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषदको गठन हो । यस मन्त्री परिषदमा गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट अर्थात् पूर्व सचिवहरुलाई संलग्न गरिएको छ र त्यसको मुख्य ध्येय संविधान सभाको चुनाव गराउनु हो अर्थात यो चुनावी मन्त्रिपरिषद हो ।
लुम्बिनीः ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक अध्ययन
यही कमजोरीका फाइदा उठाएर बुद्धको जन्मथलो आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने दावी छिमेकी मुलुक भारतबाट व्यापाक रूपमा हुँदै आएको छ । नजिकको मन्दिरलाई हेला गर्ने परिपाटीबाट अलग भएर वसन्त महर्जनले लुम्बिनी सम्बन्धमा हालसम्म विविध कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक अध्ययनलाई समेटेर एउटा ग्रन्थको आकार दिनुभएको छ- 'लुम्बिनीः ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक अध्ययन' का रूपमा ।
स्तुपमाथि चुलबुले केटी
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित एउटा स्तुपमाथि उक्लेर ध्यान गरेजस्तो बसी खिचाइएको एउटा तस्बिरले हालै ध्यान खिच्यो । तस्बिरमा रहेकी नवयुवती साधारण नै थिई, बैँस पनि चकचकी हुने खालकै थियो । तर, मेरो ध्यान खिच्नुमा उनको त्यो हावभाव थिएन, बरु स्तुपमाथि उनको चढाइ थियो । त्यस तस्बिरले केही अहम् प्रश्न उठाइदिएको छ, जसको जवाफ नखोजी हुन्न ।
नेवारभूमिका रुपमा नेपालमण्डल क्षेत्र
‘नेपाल’ शब्दले तीन वटा भौगालिक क्षेत्रलाई बुझाउ“छ । ती हुन् नेपाल गर्त – (स्वनिगः, नेपाल खाल्डो, नेपाल उपत्यका वा बृहत्तर काठमाडौं), नेपाल मण्डल (मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका पहाडी प्रदेश) र नेपाल अधिराज्य (पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग) ।
राष्ट्र सङ्घद्वारा शून्य सहनशीलता घोषणा
राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूका प्रमुखहरूको हालै सम्पन्न भेलाले महिला र केटीहरूमाथि भइरहेका भयावह हिंसालाई अन्त्य गर्न, पीडितलाई न्याय र उपचारको व्यवस्था गर्न एकीकृत प्रतिबद्धताप्रति पुनः सहमति जनाएका छन् ।